Writer Anatoly Nekrasov: Biography uye namabasa
Writer Anatoly Nekrasov: Biography uye mabasa
Anatoly Nekrasov Biography iyo September 9, 1950 akatanga muna Altai, mumusha White, danho rokutanga iri basa akaita sebhanditiwo makanika. Kwemakore, akasimuka kuti pambiru mukuru chirimwa. Makore 41, haana zvikuru aiziva chinhu pamusoro zvepfungwa kana pamusoro esoteric. Akanga, sezvo iye anoti, yakachena Marxist-hakuna Mwari.
Uye zvakare mumakore iwayo clairvoyant akamuudza kuti aizova munyori. Mashoko zvikuru varambe vachifara Anatolia, nekuti asati ake mukurusa kubudirira mumunda kunyora zvakaitika kuti maodha mupudzi, raakanga Yakanangepi. Asi, Somugumisiro, iye zvakarurama. Uye kwapera makore 10, Anatoly Nekrasov - munyori ane Biography izere vakawanda zvidzidzo, racho mabhuku akawanda uye anoyevedza uwandu nokubudirira mumunda make. Ayakaita? Izvo zvakabva zvachinja upenyu murume uyu anoshamisa?
The tipping pfungwa
At ramakumi mana okutanga oupenyu utano Anatoly akazviratidza pangozi chakakura - ari kurwara zvikuru. Doctors vakaramba kubata naye. Asi mutongo vanachiremba akauraya muuzivi kuda ramangwana kurarama. Akatanga kutsvaka dzimwe nzira chokuporesa. Saka zvishoma nezvishoma Anatoly vakatama pachake ngurwa rufu.
Pashure paizvozvo, akatanga kufunga zvoutano. Chii zvakunoita izvozvo? Nei utano mararamiro Hazviwanzovi achitungamirira hurefu? Exploring nyaya iyi, akapinda vanyura kure kare. Akatanga zvakanyorwa nomukurumbira vakachenjera kare kwouzivi. Akararama yakati kuIndia, muSiriya, uye ipapo kwazvo zvaitambidzwa kunyikadzimu philosophy, zvepfungwa uye pakunamata. Akapedza kudzidza kubva Moscow University of Russian Academy of Education uye akava nyanzvi wepfungwa.
A itsva Kutarira
Paaiva gavhuna, Anatoly Nekrasov kaona kuti zvinokosha kuramba utano - hazvisi chete Zvokudya zvakakodzera uye muviri. Akaona kuti nzira hosha kunonyanya novimba murwere mhuri, kubva mupfungwa okunze mumba, kubva nhungamiro pamusoro iyo boka iri munzanga.
Kutanga kudzidza semhuri, Anatoly Nekrasov watarisana chokuti hapana rinotsanangura hurongwa ainoita pakurigadzira. Averenga mabasa Confucius uye kare uye chipo vamwe varume zvikuru, auya pakugumisa kuti wakadaro nzira haana kumbovapo. Vanachiremba nevazivi vafunga nomwe dzakasiyana, nekugadzirisa dambudziko rimwe kana mumwe. Uye ipapo akasarudza zadza zvine maatomu akafanana zviri waMosesi.
Anatoly Nekrasov nharo pamusoro Mhuri evasingatombonamati yokungotaura hunhu kwete chete. Vose kwesayenzi iye kuitwa pakutanga panzvimbo, kuongorora yake mhuri, pakutevedzera itsva nzira uchidzidzira muukama. Kutaura zvazviri, zvinoenderana inozivikanwa kwepfungwa, usati unyore chinhu, zvinokosha kupfuura pacharo, kuburikidza ruzivo rwavo.
Anatoly anotenda kuti hapana hazvibviri muupenyu. Angapedza zvose: tisisiri kusungikana yavangabata stereotypical mafungiro uye mukava vakasununguka. Zvakaitika, iye anoti izvi ndizvo. Mumakore 65 Anatoly anotungamirira chinoshingaira mararamiro. Kuramba parwendo, kunoita pfungwa kune vakawanda - anoudzawo ruzivo rwake uye ruzivo rwatakawana anopfuura makumi maviri makore ruzivo mumunda interpersonal ukama.
Mhuri yakakurumbira munyori
In Anatoly Nekrasov ane nomwe vana, nomwe vazukuru uye mumwe mukuru-nomuzukuru. Wife Kazhinji vaimuperekedza panzendo refu. Ichi mhuri huru uye ushamwari a.
Anobvuma kuti anoda mhuri yake basa, Anatoly Nekrasov. Photos, yaakanga rakabudiswa kubva yenzendo siyana, kuratidza izvozvo. Kwepfungwa anotarira hunofadza uye akasimba. Zvino vanhu vakanga vari kudzidziswa ake yepurogiramu uye misangano, tsanangura Zvaifadza dzinokaroparuka simba uye chido chokuchinja chinhu muupenyu hwangu huve nani.
Kufambira Mberi mumunda mabhuku
Anatoly Nekrasov - munyori ane mabhuku kuramba Rating kumusoro. Uye inosimbisa chokwadi kuti vazhinji mabasa kunge ikazobudiswazve kanopfuura kamwe. Uye vamwe mumitauro inoverengeka.
Funga zvimwe mabasa akanyora Anatoly Nekrasov. The Bibliographie kumunyori une pamusoro 40 mabhuku, pasingaverengwi reprints. Munyaya ino tichakurukura zvinhu zvitatu ndanzwawo kuti achengetedze zvakanaka mhuri.
Anatoly pachake kubvunzurudzwa ake rinokurudzira kuverenga rokutanga bhuku rake yakakurumbira, "A mai rudo." In basa iri sezvarakangoita nyaya dzakawanda dzinokosha, asi chaizvoizvo ndeyokufunga akaipa, mwoyo basa wokunzwa rwaamai: kana mwana anouya yakatsviriridza mumhuri, ndiro zuva pakavakirwa dzitendererane dzose vabereki nedzimwe hama. Vakaroorana kanganwa pamusoro peiko, kanganwa pamusoro pachavo uye izvi zvinotungamirira taisireva.
"Rod. Family. Man. " Iri bhuku rinokurudzira zvakadzika hwevana vavo vabereki, vanasekuru nanambuya. Kuti kuronda zvinokonzera matambudziko mumhuri dzavo, ukama hwavo nevamwe vanhu. Zvino nemhaka iyi kuti vaswedere chaizvo vafunga, kuti vachinje, ukama hwavo kuitira kuti kudzokorora zvaitika yemadzitateguru avo. Munyori proposes nzira yokugadzirisa matambudziko, achitambanudza zvinopfuura zvose zvinobva. Anatoly Nekrasov inokurukura kuti basa iri kuva nechokwadi kuti kuverenga vanhu vaya chete kuenda kutanga mhuri. Uyu inoshanda kutungamirira vaya vanoda kuva chaiye "mukuru chikepe mhuri."
"Rudo Triangle." Kazhinji tinonzwa izwi "rudo Triangle": kana muukama vaviri vachipindira mumwe munhu. Asi chokwadi, dzakadai masangano kunogona zvakawanda. Mumwe murume anopa zvakawanda rudo muchina, hove, musikana, mai kana vana. On hwaro ichi, pangava nematambudziko inokosha, zvichiita kuti kuparadzwa mhuri.
kwete sei abatwe polygon yakadaro? How kudzorera pakuenzanisa rudo muhukama hwemhuri? Tiri kutsvaka mhinduro mubhuku rino.
Anatoly Nekrasov Books tiriverenge. On vavo mapeji guru revanhu uchenjeri twa, izvo zvichakubatsira vakai kubudirira, inoita rudo, mufaro.
Chokwadi, anopfuura yakareba kwayakaita sezvo wepfungwa Anatoly Nekrasov aipedza zvizhinji hurukuro uye misangano ayo nevaverengi uye makasitoma. Asi ake okupedzisira kurovedza "chokubuda upenyu" rakasiyana yapfuura vaya. All nokuti kuti basa iri iye unobatanidzwa vose ruzivo uye unyanzvi vawana mumakore makumi maviri apfuura. The kosi kunoita kwenguva pfupi nguva ipfuure pfungwa haizogadzirisiki muupenyu hwekare, kuwana mufaro, izvo kuchawedzera zuva roga roga.
Munguva ichangopfuura, Anatoly achishanda chisikwa chitsva. Iri kutaura zvitsva adzidze interpersonal ukama uye basa iri pachavo. "Tenzi upenyu hunofadza" - saka anoratidza kwakavakirwa mabhuku Anatoliya Nekrasova.
Vladimir Zheleznikov: novelist uye screenwriter. Nyaya "The Scarecrow"
Barbara cho mutambo "mabhanan'ana" Ostrovsky
Mabhuku Kind. Kubva nhetembo kuti yakakura
Svetlana Ulasevich. About vatambi havasi yokufungidzira yangu
Pfupiso yebhuku "Vasiliya Shibanova" NdiTolstoy
Adamson Dzhoy: Books, Biography, chinokonzera rufu
Huya hunenge uye manune mahabhurosi. Maintenance, kudyara, chirwere kuzvidzora matanho
How kuzochera Niusha pachavo kana mwana
Svoto panguva pamuviri: sei kuderedza mamiriro?
How kudzosera iPhone wako Via DFU
Actor Andrei Panin: Filmography, Biography, mapikicha
How kukura howa pamusha: Oyster
KuChelyabinsk zvisakamboonekwa uye dzinonakidza nzvimbo muguta
Yaroslavl Museum-Reserve. Yaroslavl State Historical-Architectural uye Art Museum-Reserve
Kana kadhi muverengi asingashandi
Monument kuna somununuri Musoja muBerlin. Monument muBerlin raMwari Treptow Park
Kuvaka migwagwa. Sei migwagwa zvinodhura kudaro?
Analytical pfungwa - zvose tsika anoora kupinda zvinoriumba